घर भाडा छुट नगर्नेहरु माथी एक्सन लिने अनेरास्ववियुको चेतावनी ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
घर भाडा छुट नगर्नेहरु माथी एक्सन लिने अनेरास्ववियुको चेतावनी !
Published :9August, 2020 8:48 am
कोरोना भाइरसको वैश्विक महामारी र जारी गरिएको लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण विभिन्न तहका धेरै विद्यार्थीहरुमा अनेकन समस्याहरु पैदा भएका छन् । विद्यार्थीहरुका विभिन्न खाले समस्याहरुमाथि यथाशीघ्र सम्बोधन होस् भनी सत्तारूढ नेकपाको भातृसंगठन अनेरास्ववियु दोलखा शाखाले एक विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।